साहित्य. Break n Links: Media for all - Across the globe
अरुले नभएको इतिहास खन्छ सयैले बंगलादेशी यहाँको स्वदेशी हुन्छ गोर्खाले भएको आफ्नो इतिहास पनि पुर्छ यसैले गोर्खा यहाँको विदेशी हुन्छ।
मेरै प्रेमी सामूहिक बलात्कारको साक्षी !
म मात्रै होइन यहाँ लाखौ छोरीहरुले यही सुन्दै बाँचिरहेछन्। आफूले आफैमाथि बन्देज लगाएर। नलगाउँ यो समाजले दिने उपमा सहने क्षमता राख्नुपर्छ। किनकी यस्ता उपमा दिन्छन् कि ती उपमा सुनेरै आत्महत्या गर्ने पनि धेरै छोरी छन्। जो सब सहेर बाँचेका छन् ती बहादुर छोरी हुन्। म थिए आफ्नो मनको सुन्ने। मनमौजी गर्ने। सायद म बहादुर छोरी बन्न चाहन्थेँ। त्यो गुण केही मात्रामा ममा थियो।
नश्वर शरीर त एक दिन बिलाउने नै हो माटोमा। तर पनि जीवन र मृत्यु रहस्यमय नै छन्। बुझ्न त्यति सजिलो कहाँ हुनु। मलाई लाग्छ, जसलाई हामी जीवन भन्छौ त्यो पनि मृत्युसम्मको यात्रा नै त हो। मृत्यु हाम्रो जन्मदिनदेखि नै शुरु हुन्छ। मृत्युलाई एकदिन हरेक प्राणीले स्वीकार गर्नुपर्छ।
हतार हतार लम्किराख्दा बेगसँगै सुस्याउँदै टुङ्गो छिचोल्नै लाग्दा मुसुक्क मीठो स्वरमा तरङ्गिन्छ खाना भो ओठ तन्काइ बराबरको मुस्कान चेहरामा पोती भन्छु ‘अँ’ पेट भोकले क्वाइँ क्वाइँ गरेनी अँ फुत्त निस्किहाल्ने अटोमेटिक मोड अन भइहाल्ने ओठ तन्किहाल्ने, मुसुक्क मस्किइहाल्ने खाना भो
मलाई अलिकती पनि पछुतो थिएन। जुन व्यक्ति कहिल्यै मेरो श्रीमान बन्न सकेनन् उनीसँग बस्नुभन्दा बरु छुटिनु नै मेरो लागि उत्तम थियो। मैले असिमको आँखामा आँखा जुधाएर हेरेँ। सायद पश्चातापको भूमरीमा जलिरहेका थिए, उनी।
सिमानामा जंगे पिल्लर , ढल्यो अरे आज
कमलमणिसँग त्यो पहिलो र अन्तिम भेट